ဖုန်းအခမဲ့လိင်ဂိမ်းများကိုသင်ဝဘ်ပေါ်တွင်ရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုမိုဘိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားဘို့အကြီးမားဆုံးဆိုဒ်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နှင့်ဤဂိမ်းကိုသင်ရှိစေခြင်းငှါမဆိုမိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်,ဒါကြောင့်တစ်ဦးအိုင်ကွန်သို့မဟုတ်အန်းဒရွိုက်လျှင်နေပါစေ. သုိ႔ေသာ္၎တုိ႔၏၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ဤဂိမ္းမ်ားကုိကစားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ပြန်လာဖို့အတွက်ဘာမှမလိုပါဘူး။ ဤသည်ကိုသင်ဝင်ရောက်ခွင့်များအတွက်ပေးဆောင်စေလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုက်မဟုတ်ငါတို့သည်သင်တို့၏ဒေတာကိုခိုးယူကြပါဘူး။ ငါတို့သည်သင်တို့နေပါစေသင်ရေးစေသည်ဘာပျော်စရာအချိန်များအတွက်လိုအပ်သမျှအကြောင်းပြချက်ပေးပါ။ ကျနော်တို့ဂိမ်းအင်တာနက်ကိုပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်ညစ်ညမ်းအပေါငျးတို့သအမျိုးအစားဖွဲ့စည်းရန်ရှိသည်။, ဆယ်ကျော်သက်များမှမီနာနှင့်ကျိန်းဝပ်ရာမှအမှောင်ဆုံးဘ ၀ စွန့်စားခန်းများမှသင်ဒီမှာအရာအားလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်။ တဖန်သင်တို့ဤမျှလောက်များစွာသောဂိမ်းစတိုင်များအတွက်တွေ့လိမ့်မည်။ ဂိမ်းအချို့သည်လက်တွေ့ကျကျလိင်အ ၀ တ်အစားအဖြစ်ကစားကြပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများစွာဖြင့်လာသည်။ အခြားသူများကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပုံပြင်များနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဇာတ်ကောင်အပြန်အလှန်နှင့်အတူရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့တောင်မှအသစ်တခုလမ်းသို့မဟုတ်အီမိုဂျီပုံပြင်များခံစားနေသောစာသားကိုအခြေခံပြီးဂိမ်းများရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသည်သမျှသောဤကြောက်မက်ဘွယ်ဂိမ်း၏ထိပ်တွင်,ငါတို့သည်လည်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များအားဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သင်အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ မဆိုယုတ်အတွေ့အကြုံကုမ္ပဏီနှင့်အတူပိုကောင်းသည်နှင့်သင်ဤဆိုက်၏မှတ်ချက်ကဏ္ဍများအတွက်လိုအပ်သမျှကုမ္ပဏီတွေ့လိမ့်မည်။ သင်တို့သည်လည်းထွက်ပလက်ဖောင်း၏ဖိုရမ်အတွက်အကြောင်းအရာများအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆွေးနွေးယုတ်ကလူအများကြီးတွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အပေါ်အရာအားလုံးပူးတွဲမျှကြိုးနှင့်အတူလာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ညဖုန်းအခမဲ့လိင်ဂိမ်းခံစားကြည့်ပါ!
သငျသညျယနေ့ညဝဘ်ပေါ်မှာဤဂိမ်းကစားနေတဲ့ပေါက်ကွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်နှင့်သင်သည်တစုံတခုကိုတပ်ဆင်သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်မပါဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှိသည်အရာအားလုံးကိုခံစားနိုင်။ ရိုးရှင်းစွာအသငျသညျကိုခံစားချင်သောကမ်ဘာပျေါတှငျရှာနေစုဆောင်းမှုကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်တစ်ချိန်က,ကစားခလုတ်ကိုထိမှန်။ ဒီဂိမ်းကငါတို့ဆိုက်ရဲ့နောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုရဲ့အသစ်တစ်ခုကိုဘလူးတုသ်မှာဖွင့်ပြီးသင်လုပ်သမျှကိုကန့်သတ်ချက်မရှိနဲ့ကစားနိုင်မှာပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်စုံလင်သောအော်ဂဇင်လိုအပ်သမျှရှိသည်။
လက္ေတြ႕က်က်လိင္အေတြ႕အၾကံဳကိုခံစားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆိုက္ရဲ႕ လိင္အေတြ႕အၾကံဳကိုစတင္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ သင္တို႔သည္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသို႔မဟုတ္ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား၊ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား၊ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား၊ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ကာတွန်းတွေ၊ကာတွန်းတွေ၊ရုပ်ရှင်တွေ၊ခေတ်ရေစီးကြောင်းဗီဒီယိုတွေကနေနာမည်ကြီးဇာတ်ကောင်တွေကိုဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကအမြဲအဲလျဆာ,ကျော်နာရီကနေဖြစ်နိုင်သမျှကမ်ဘာပျေါတှငျချင်လျှင်,ယခုသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤဆိုဒ်သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးသင်၏နံပါတ်တစ်အရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုင်ပြီးသင်ပြန်လာတိုင်းဤစုဆောင်းမှုတွင်ဂိမ်းအသစ်များပါ ၀ င်သည်ကိုတွေ့တိုင်းသင်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကဒီဆိုက်ပါရှိပါသည်နှင့်ညစဉ်ညတိုင်းကဒီမှာပြန်လာရန်သင့်အားဤမျှလောက်များစွာသောအကြောင်းပြချက်ပေးပါ။ စုဆောင်းမှုသည်မည်သည့်ယုတ်ကစားသမားကိုမဆိုနှစ်သက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သောလိင်ဂိမ်းရာပေါင်းများစွာပါ ၀ င်သည်။ ဒီမှာလာနှင့်အင်တာနက်ပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်သောရိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ။ ဒီညမင္းတို႔ကိုေစာင့္ေနတယ္!